သင့်ကိုယ်ပိုင် Dogfood ကိုစားခြင်း | Martech Zone
သောကြာနေ့, ဖေဖေါ်ဝါရီလ 6, 2009 တနင်္ဂနွေ, သြဂုတ်လ 23, 2009 Douglas Karr
ဒီဝေါဟာရကိုအင်တာနက်ပေါ်မှာအတော်လေးအသုံးများနေသည်ကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။ ငါအကြောင်းပြောဆိုတဲ့အခါ ကော်ပိုရိတ်ဘလော့ဂ်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝဘ်ဆိုက်သည်ကော်ပိုရိတ်ဘလော့ဂ်များမှတိုက်ရိုက်လာခြင်းဖြစ်သည်ဟူသောဝေါဟာရကိုကျွန်ုပ်အသုံးပြုသည်။
သူကဆိုပါတယ်, ဒီမှာ StumbleUpon မှတစ်ဆင့်ငါတွေ့သောစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ဓာတ်ပုံဖြစ်သည် Scott Rope ရဲ့ဘလော့ဂ်။ သင်၏ကိုယ်ပိုင် dogfood စားခြင်းအကြောင်းပြောဆိုပါ!
Tags: ဒေတာပေးပို့ဝန်ဆောင်မှုဒေတာစီမံခန့်ခွဲမှုပျက်ကွက်ခြင်း - အောင်မြင်မှုအတွက်လျှို့ဝှက်ချက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးပြန်လာကျောက်တံတားWordPress
6:2009 pm တွင်ဖေဖော်ဝါရီ 1, 41 တွင်
B2B စျေးကွက်ရှာဖွေရေးသည်ဤကဲ့သို့သောအမှတ်ရစရာ၊ အမှတ်ရစရာသရုပ်ပြမှုများလိုအပ်သည်။
ကူးရေးသောစာကလေးအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်၏အထူးစာအုပ်အတွက်ကျွန်ုပ်လုပ်သည်။ ၎င်းတွင်အခန်းရှိတံခါးပေါက်ပါသောထောင်ကျနေသောလူတစ်ယောက်ကို Kryptonite ဆိုင်ကယ်သော့ခတ်ထားသည်။ ခေါင်းစဉ်သည် 'Bike Thief' သာဖြစ်သည်။
6:2009 pm တွင်ဖေဖော်ဝါရီ 5, 20 တွင်
Doug, ဒီဟာကြီးစွာသောဓာတ်ပုံကိုစေသည်ပေမယ့်အမှန်တရား, ငါထင်, ဒီမကောင်းတဲ့စျေးကွက်ရှာဖွေရေး။
တကယ်တော့ဒါဟာဒေါ်လာအတု ၅၀၀ သာရှိပြီးငွေအတုတွေပေါ်မှာတင်ထားနိုင်ပြီးလူတွေဟာခြေထောက်ကိုသာသုံးပြီးသူတို့ရဲ့ဖောက်ခွဲဖျက်ဆီးမှုကိုခံကြရပါတယ်။ မည်သူမျှစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကိုဖောက်ဖျက်ခြင်းမရှိစေရန်နှင့် အကယ်၍ ချိုးဖောက်ပါကလူများသည်ငွေကိုမသိမ်းဆည်းနိုင်စေရန်လုံခြုံရေးအစောင့်တစ် ဦး ရှိသည်။ -GizMode
ငါထင်တာကတော့ဒီမြှင့်တင်ရေးဟာအနည်းဆုံးလှည့်စားမှုတစ်ခုလို့ထင်တယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒေါ်လာရာဂဏန်းအနည်းငယ်ချပြီးလုံခြုံရေးလက်ဆောင်ရှိတာကထုတ်ကုန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြောဆိုချက်တွေဟာအမှန်တကယ်စွမ်းဆောင်နိုင်မှုထက်အများကြီးပိုတယ်။ မထားနဲ့ သငျသညျ သင်ဤအချက်အလက်များထွက်တွေ့ရှိပြီးနောက်အနည်းငယ် deflated ခံစားရ?
၎င်းသည်“ သင်၏ကိုယ်ပိုင် dogfood ကိုစားခြင်း” ၏ဥပမာလည်းမဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည်သင်ကိုယ်တိုင်စီးပွားရေးလုပ်ကိုင်ရန်အသုံးပြုခြင်းဖြင့်သင်ဖန်တီးသည့် application များအပေါ်စမ်းသပ်ခြင်းပြုလုပ်ရန် software software တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါဟာ is Compendium တွင်သင်လုပ်သောအရာတစ်ခုဖြစ်သည်၊ သို့သော်လူအများရှေ့သရုပ်ပြခြင်းတွင်နာရီအတန်ကြာလုံးလုံးနီးပါးငွေအတုနှင့်လုံခြုံရေးအစောင့်များကိုထားရှိခြင်းသည်သင်၏ကုန်ပစ္စည်းအပေါ်သင်၏စီးပွားရေးကိုမလုပ်ဆောင်နိုင်ပါ။ 3M သည်အမှန်တကယ်“ သူတို့ကိုယ်ပိုင် dogfood ကိုစား” ရန်အတွက်သူတို့သည်သူတို့၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုသိသိသာသာကာကွယ်ရန်သူတို့၏လုံခြုံရေးဖန်ခွက်ကိုအသုံးပြုရမည်။
လူတွေကိုရိုးသားစွာ၊ လေးစားမှုနဲ့ဆက်ဆံခံထိုက်တယ်။ သင်ဖန်တီးထားတဲ့ထုတ်ကုန်ကိုဂုဏ်ယူစွာသုံးခြင်းအားဖြင့်သင့်ကိုယ်ပိုင်အလုပ်ကိုယုံကြည်ကြောင်းပြသရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ မှားယွင်းသော buzz ကိုထုတ်လုပ်ရန်ထိန်းချုပ်ထားသော photo-op တစ်ခုကိုအတူတကွထားခြင်းသည်လုံးဝရိုးသားပြီးလေးစားမှုကင်းမဲ့သည်။ ၎င်းသည်သင့်ကိုယ်ပိုင်ထုတ်ကုန်များအပေါ်ယုံကြည်မှုအတွက်စဉ်ဆက်မပြတ်ပြသခြင်းဖြစ်သည်။ 3M ကဒီပုံကိုလူတွေဘယ်လိုပြန်ပြောင်းလဲ၊
6:2009 pm တွင်ဖေဖော်ဝါရီ 8, 33 တွင်
wow - မင်းကအရမ်းစာသားလေ့လာသူပါ။ (ဖြည့်စွက်ခြင်း, မစော်ကား) ။
Re: သင့်ကိုယ်ပိုင် dogfood ကိုစားခြင်း - system သည် software လား၊ ကြော်ငြာလားပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အရေးမကြီးပါ။ ဒါကကျနော့်အမြင်ပဲ။
Re: Advertisement - ကြော်ငြာမှာပါ ၀ င်တဲ့တီထွင်ဖန်တီးမှုကိုကျွန်တော်တန်ဖိုးထားလေးစားတယ်။ ဒါကတန့်ဖြစ်စေမဖြစ်စေအရေးမကြီးဘူး; လူတွေကိုထုတ်ကုန်ဒါမှမဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုကိုစဉ်းစားစေတယ်။
သင်ရည်ရွယ်ထားတာကပကတိဖြစ်မယ်လို့ထင်နေတယ်၊ ​​3M ဟာသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဖန်ခွက်တွေနဲ့အကာအကွယ်ပေးနေတဲ့အိတ်ဖွင့်တစ်နေရာမှာဒေါ်လာနှစ်သန်းတန်ရှိတယ်။ ကျနော့်ယူဆချက်ကတော့ကွဲပြားပါတယ်။ သူတို့ကဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ပြောချင်တာပါ။ အဖြစ်အပျက်ကိုချက်ချင်းတွေ့တော့ငါနားလည်သွားတယ်။
7:2009 pm တွင်ဖေဖော်ဝါရီ 12, 38 တွင်
ဒါကြောင့်သင်ကအချက်အလက်ရှာဖွေတာကပြောနေတယ် ပြီးနောက် ဓာတ်ပုံကိုကြည့်ခြင်းကသင့်ကြော်ငြာအပေါ်သင်၏သဘောထားအပေါ်မသက်ရောက်ခဲ့ဘူးလား။ ဒီပုံကိုမြင်သူအားလုံးနီးပါးငါခန့်မှန်းတယ် ပြီးတော့သင်ယူတယ် မွန်းလွဲပိုင်းဖြစ်တာ၊ လုံခြုံရေးအစောင့်တွေရှိတယ်၊ မင်းကဖန်ခွက်ကိုကန်နိုင်ရုံသာမကငွေအားလုံးနီးပါးကအတုဖြစ်တယ်၊ ဒါကအမာခံတစ်ခုပါ ဆိုးသော ကြော်ငြာ - မင်းထင်ထားတာမှန်တာမမှန်ဘူးဆိုတာမင်းသိသွားရင်
3M သည်သူတို့၏ဖန်ခွက်၏အားသာချက်ကိုလူအများရှေ့တွင်ပြသခြင်းသည်အလွန်ကောင်းသောအကြံဖြစ်သည်။ သို့သော်စာရွက်ဖန်ခွက်ပေါ်တွင်အုတ်ပုံများရှိနေသည့်အကာအကွယ်ရှိသော Cube တစ်ခုကိုဘာကြောင့်မတည်ဆောက်သင့်သနည်း။ ဒါမှမဟုတ်ဖန်ခွက်ကြမ်းပြင်ကိုဖန်တီးနေသလား။ ဤရွေ့ကားလုံးဝစစ်မှန်တဲ့ဖြစ်သောအလွန်ကြီးစွာသောပုံပြင်ကိုပြောပြ!
7:2009 pm တွင်ဖေဖော်ဝါရီ 8, 51 တွင်
ငါရိုးရိုးသားသားမကျင့်ဘူး ဒီနေ့ခေတ်မှာတွေ့ရတဲ့ကြော်ငြာတိုင်းကသူတို့ရဲ့စီးပွါးရေးကြော်ငြာတစ်ခုလား၊ Google Adwords ကြော်ငြာလားဆိုတာကိုပုံပြင်နဲ့ပြောဖို့ချဲ့ကားပြောဆိုခြင်း။ တတိယအကြိမ်၊ 3M ၏ရည်ရွယ်ချက်မှာလိမ်ရန်ဖြစ်သည်၊ တီထွင်ဖန်တီးမှုဆိုင်ရာကြော်ငြာတစ်ခုပေါ်ထွက်လာရုံသာမဟုတ်ပါ။
ဒီကိစ္စမှာသူတို့ဟာကောင်းတဲ့အလုပ်တစ်ခုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ငါထင်တယ်။ ဖန်ခွက်ပေါ်ရှိကျောက်ပုံတစ်ပုံသည်ကျွန်ုပ်၏ထင်မြင်ချက်အပေါ်သက်ရောက်မှုရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည် 'အားသာချက်' ကိုပြောလိမ့်မည်။ သို့သော် 'လုံခြုံရေး' အကြောင်းမဟုတ်ပါ။
အခုဆိုရင်ဓာတ်ပုံထဲမှာဗီဒီယို (သို့) ပုံပြင်တစ်ပုဒ်ပါနေရင်ဒေါ်လာသန်းတစ်ရာရှိတယ်၊ လုံခြုံရေးကိုမသုံးဘဲအများပြည်သူသွားရာနေရာမှာရက် ၃၀ ကျန်နေတယ်…ပြီးတော့မင်းနဲ့သဘောတူလိမ့်မယ်။ သို့သျောလညျး, 30M သူတို့အားအရာတစ်ခုခုကိုနှင့်အတူအစက်အပြောက်နှင့်အတူအဘယ်သူမျှမ။
မည်သူမျှသူတို့စိတ်ထဲတွင် 3M လုံခြုံရေးဖန်ခွက်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောဘေးအန္တရာယ်ကင်းသည့်ဘဏ်အသစ်တစ်ခုကိုဆောက်လုပ်ပြီးသွားမည်မဟုတ်ပါ။ ၎င်းတို့ကိုတွေ့မြင်ပြီးပြီလား။ မထင်ပါဘူး
7:2009 pm မှာဖေဖော်ဝါရီ 2, 42
ဒါကတော်တော်အစွမ်းထက်အမြင်အာရုံပါ! ထိုအခါငါ '' သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင် dogfood ကိုစား '' ဟူသောထားသောစာပိုဒ်တိုများအစဉ်အမြဲချစ်ကြတယ်
8:2009 pm မှာဖေဖော်ဝါရီ 9, 59
Doug စိတ်မကောင်းပါဘူး။ ဒါပေမယ့်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး Robby နဲ့ကျွန်တော်သဘောတူတယ် ဒီပုံကိုကျွန်တော်ပထမဆုံးအကြိမ်တွေ့တော့ကုမ္ပဏီတစ်ခုကသူတို့ထုတ်ကုန်ကိုယုံကြည်စိတ်ချမယ်၊ သူတို့ကသူတို့ပိုက်ဆံတွေအများကြီးထဲထည့်ပြီးလူတွေခိုးယူဖို့ရဲရဲရဲရဲရဲရဲရဲရဲလို
မင်းရဲ့ကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှာငါထင်မြင်ချက်ထားခဲ့တာပေါ့။ သူတို့ရဲ့ဖန်ခွက်ကိုချိုးဖျက်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့လူတွေ (ပြသနာမအောင်မြင်) သူတို့မှာလျှို့ဝှက်ဗွီဒီယိုကင်မရာတွေရှိလားလို့မေးတယ်။
ဒါပေမယ့် Robby ကလုံခြုံရေးအစောင့်တွေအများကြီးကိုဖိတ်ပြီးတာနဲ့မင်းခြေထောက်ကိုသုံးပြီးပိုက်ဆံအတုတွေသာသုံးတာနဲ့ငါလှည့်စားခံခဲ့ရတယ်။
ငါသေချာပေါက် 3M နည်းနည်းတော့မထင်ဘူး။ (post-it note ကိုပဲငါဝယ်မယ်) ဒါပေမဲ့ကြော်ငြာကငါနဲ့အတူတန်ဖိုးအားလုံးဆုံးရှုံးသွားတယ်။ သူတို့ရဲ့လုံခြုံရေးဖန်ခွက်ကိုငါဝယ်ဖို့ငါထွက်သွားမှာမဟုတ်ဘူး။
14:2009 pm မှာဖေဖော်ဝါရီ 2, 43
၂၀၀၅ ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာစတင်ခဲ့တဲ့ဒီစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးကိုစဉ်းစားမိရင်ဒါဟာရှည်လျားတဲ့အမြီးကိုအဓိပ္ပာယ်အသစ်ပေးတယ်လို့ပြောနိုင်ပါတယ်။ PR / Marcom အဖွဲ့သည်၎င်းတို့၏ဂူဂဲလ်သတိပေးချက်များကိုတပ်ဆင်ထားဆဲဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်မျှော်လင့်ပါသည်။ ဤပို့စ်များသည်၎င်းတို့အားထူးဆန်းစေလိမ့်မည်။
ဆက်သွယ်ရေးရှုထောင့်မှကြည့်လျှင်၊ ၎င်းသည်အမှတ်တံဆိပ်ကိုဆက်သွယ်ပြောဆိုခြင်း၊ ၄ င်းတို့၏တန်ဖိုးများကိုအားဖြည့်ခြင်းနှင့်အင်အားကြီးမားသောသတင်းစကားကိုပြသနိုင်သည့်ချက်ချင်းမှတ်မိလွယ်သောအမြင်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါကဘတ်စ်ကားမှတ်တိုင်မှာလုပ်ရတာခက်တယ်။
7:2009 pm တွင်သြဂုတ်လ 4, 51
Robby Slaughter သည်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးလောကကိုလုံး ၀ နားမလည်ပါ။ သင်ယခုပြောနေသည်မဟုတ်ပါ၊ Robby? ကောင်းပြီ, ထို့နောက်သူကကျွမ်းကျင်တဲ့စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကိရိယာတခုဖြစ်ခဲ့သည်ပုံရသည်။ ကြော်ငြာသည်သုံးစွဲသူစိတ်ထဲတွင်အမှတ်ရစရာပုံရိပ်တစ်ခုဖန်တီးရန်ဖြစ်သည်။ ဤလုပ်ရပ်သည်သတိမပြုမိဘဲမနေပါ။ မည်သည့်အကြောင်းကြောင့်ပင်ဖြစ်ပါစေ၎င်း၏တိကျမှု / တိကျမှုနှင့်ထုတ်ကုန်သည်သင်ပုံရိပ်မှပေါ်ထွက်လာသည့်အတိုင်းအမှန်တကယ်လုပ်ဆောင်မှုရှိမရှိကိုဆွေးနွေးရန်လိုအပ်သည်။ သင်ယခု၎င်း၏ထုတ်ကုန်၏သိသိသာသာသတိပြုမိကြသည်။ ယခုတွင်သင်သည်သင်၏ ဦး ခေါင်း၌ 3M ဘေးကင်းလုံခြုံသည့်ဖန်ခွက်တစ်လုံးကိုဖျောက်ဖျက်နိုင်သည်။ ဒီတော့ ကျွမ်းကျင်သောစျေးကွက်ရှာဖွေရေးကာလ။